Sida loo damiyo, dib loo bilaabo ama loo dhaqaajiyo iPhone X | Wararka IPhone
Xad-dhaaf aad u hooseeya, taasi waa waxa shirkadda Cupertino ay dooneysay inay ku fuliso iPhone X, si aad u badan ayaa nalooga tagay iyada oo aan lahayn badhanka Guriga ee lagu garto astaamo aad u tiro badan oo iPhone ah. Noqo sida ay dhici karto, hadda shakiyo qaarkood ayaa bilaabmaya inay ka soo baxaan ku saabsan hawlgalka iyo qaababka tilmaam ee iPhone X, laakiin Actualidad iPhone ayaan u nimid inaan ku siino fiilo.
Ayaa doonaya inuu damiyo iPhone X? Weligaa ma ogaan kartid laakiin Maanta waxaan ku tusineynaa jidadka loo damiyo, dib loo bilaabo ama loo kiciyo iPhone X sida baahidaadu tahay. Haddii aad leedahay iPhone X iyo shakiyo badan, waa inaadan ka maqnaan casharradan yar laakiin loo baahan yahay.
Seddexdan ficil caadi ahaan kuma badna macruufka, markaa waxaa laga yaabaa inaan waxoogaa shaki ah ka qabno markay tahay fulinta howlo fudud, aan halkaa u tagno.
Sideen u xidhi karaa ama dib ugu bilaabi karaa iPhone X? Si loo demiyo iPhone X, si la yaab leh, waa inaanu riixnaa badhanka Awooda (dhinaca midig) iyo Volume + badhanka (dhinaca bidix) illaa lix ilbidhiqsi, illaa ay ka muuqato shaashadda "Iskuday si aad u demiso", ka dibna siibiyeyaha furaha ayaa gunta gabi ahaanba ka dami doona xarunta.
Sideen ugu qasbi karaa xiritaanka iPhone X? Mararka qaar taleefanka ayaa ku dhegi kara, tan awgeed waa inaan isticmaalnaa "xiritaanka qasabka ah" oo furaha isku dhafan uu aad u xiiso badan yahay. Waa inaanu riixnaa oo aan sii deynnaa mugga, hoos u dhignaa oo u sii deynnaa mugga hoosna u haynaa badhanka awoodda, ka dib harada Apple ayaa la soo bandhigi doonaa oo terminal-ka ayaa dib loo bilaabi doonaa.
Sideen ugu hawlgeliyaa shaashadda iPhone aniga oo aan furin? Si tan loo sameeyo, waa inaad sameysaa taabasho yar oo laba-ilbiriqsi ah meel kasta oo shaashadda ah inta uu xiran yahay oo waxaan arki doonaa shaashadda qufulka.
Iyagu waa laba toobiye oo aad u xiiso badanIsla badhamada ayaa loo adeegsadaa dhammaan noocyada waxqabadyada labaad sida shaashadaha shaashadda. Waxaan rajeyneynaa markale in casharkeenu kaa caawiyey inaad deg deg uga baxdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo damiyo, dib loo bilaabo ama loo tooso iPhone X
Si aad u dhaqaajiso shaashadda uma baahnid laba taabasho oo labaad, kaliya taabashada shaashadda "caadiga ah".
saxda ah taabashada fudud ayaa ku filan. Ha siin wax saxaafad dheer ah.